बाइडेनले अमेरिकी विदेशमन्त्रीमा एन्टोनी ब्लीङकेनलाई नियुक्त गर्ने | पश्चिम सन्देश
Home प्रवास बाइडेनले अमेरिकी विदेशमन्त्रीमा एन्टोनी ब्लीङकेनलाई नियुक्त गर्ने
बाइडेनले अमेरिकी विदेशमन्त्रीमा एन्टोनी ब्लीङकेनलाई नियुक्त गर्ने
नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विदेशमन्त्रीमा एन्टोनी ब्लीङकेनलाई नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छन् । ब्लीङकेन लामोसमयदेखि विदेश नीतिका सल्लाहकार रहँदै आएका छन् । ओबामा राष्ट्रपति हुँदा उनले उपविदेशमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा उपसल्लाहकारका रुपमा काम गरेका थिए ।
उनले ओबामा प्रशासनका बेलामा विदेश नीतिका सन्दर्भमा मुख्य भूमिका खेलेका थिए । क्रिमियामाथि रसियाको आक्रमणको कस्तो प्रतिकृया जनाउनेदेखि ओसामाबिन लादेनमाथिको आक्रमण र आईसीसीबिरुद्धको लडाईमा उनले मुख्य भूमिका खेलेका थिए ।
ब्लीङकेनले बिल क्लिन्टनका पालामा समेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा काम गरेका थिए । उनले युरोप मामलाका लागि बरिष्ठ निर्देशकका रुपमा समेत काम गरेका थिए । उनी क्लिन्टनको विदेश नीतिबारे भाषण लेख्ने प्रमुख व्यक्ति समेत थिए । ट्रम्पले बिभिन्न देशसँग बिगारेको सम्बन्ध सुधार गर्दै अमेरिकी विदेश नीतिलाई सुदृढ गर्नु उनको मुख्य भूमिका हुनेछ ।
५८ बर्षका ब्लीङकेन मध्यमार्गी व्यक्तित्वका रुपमा परिचित छन् । पेरिसमा हाइस्कुलको अध्ययन गरेका उनले हार्भर्डबाट अण्डरग्रयाजुएट डिग्री हासिल गरेका थिए । त्यस्तै कोलम्बियाबाट कानूनको विषयमा डिग्री हासिल गरेका थिए । उनका पिता डोनाल्ड पनि हार्भर्ड ग्रयाजुएट हुन्, जसले हंगेरीका राजदूत भएर समेत काम गरेका थिए ।
ब्लीङकेनले पत्रकार र वकिलका रुपमा काम गरेका थिए । उनी बाइडेनको चुनावी अभियानमा विदेश नीतिको मुख्य अनुहार रहेका थिए । उनले इरान आणविक सम्झौतामा अमेरिकाको पुन प्रवेशका लागि समेत वकालत गर्दै आएका छन् ।
बाइडेनले आजै आफ्नो मन्त्रिपरिषदका केही सदस्यको नाम घोषणा गर्ने जनाइएको छ । साथै बाइडेन केही मुख्य पदमा छनौट गरेका व्यक्तिको नाम समेत घोषणा गर्ने जनाइएको छ । बरिष्ठ कुटनीतिक लिण्डा थोमस ग्रिनफिल्डलाई राष्ट्रसंघका लागि राजदूतमा छनौट गर्ने जनाइएको छ ।
Previous articleविपरीत लिङ्गीप्रति किन आकर्षण बढ्छ ?
Next articleजर्जियामा मंगलबारदेखि तेश्रो पटक मतगणना गरिने, डिसेम्बर २ मा समाप्त हुने
paschimsandesh - ९ मंसिर २०७७, मंगलवार १९:२९ 0
सरकारी ‘एनआरएन कार्ड’ लिएकालाई अन अराइभल भिसा
अब सरकारी एनआरएन कार्ड लिएका र म्याद बाँकी रहेका विदेशी नागरिकताप्राप्त नेपाली मुलकाहरुलाई नेपाल जाँदा विमानस्थलमा नै अन अराइभल भिसा दिइने भएको छ । तर यात्रा...
पढ्न छुटाउनु भयो कि ??
इन्फोग्राफिक्स : डिभी २०२२ का लागि यसरी दिनुहोस् आवेदन
१, डिभी लोटरीको आवेदन दिंदा राम्रोसँग निर्देशिका पढ्नुहोस् । यो निर्देशिका अमेरिकी सरकारको वेवसाइटमा उपलब्ध छ । २, अक्टोबर ७, २०२० को मध्यान्हदेखि नोभेम्बर १०, २०२०...
जीवन शैली paschimsandesh - ९ मंसिर २०७७, मंगलवार १९:२९ 0
अन्य paschimsandesh - ९ मंसिर २०७७, मंगलवार १९:२९ 0
पश्चिम विशेष paschimsandesh - ९ मंसिर २०७७, मंगलवार १९:२९ 0